TEOLOJIA LOTERANA - Ny Teolojian'ny Fampandrosoana
Ny Teolojian'ny Fampandrosoana
Notanterahin’Andriamanitra avokoa ireo fampanantenana rehetra nataony ka feno fitahiana tokoa ny fiainan’ny Israely olon’Andriamanitra; Asehon’ny Gensisy fa nanan-karena tokoa ry Abrahama, omby sy ondry izany. Tahaka izany koa ny harena teo amin’i Jakoba: “Fa samy be loatra ny haren'izy mirahalahy, ka tsy mba nahazo niray monina izy; ary tsy omby azy ny tany fivahiniany, noho ny omby aman'ondriny.” Gen.36:7
Ny filazantsara izay lazain’I Jesosy hoe: “Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be.” Jao.10:10 dia tsy teny fampanantenana fotsiny fa asa efa notanterahany. Tsy momba ny fiainana mandrakizay ihany fa mahakasika koa ny fiainantsika eto an-tany. Hoy indrindra ny filazan’ny Soratra Masina izany: “Anaka, tandremo ny teniko; Atongilano ny sofinao hihaino ny filazako…Fa aina ho an'ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra.” Ohab.4:20, 22
Hitantsika fa milaza mazava amintsika ny heviny Andriamanitra ny amin’ny hanomezana ny tena fiainana ho an’ny olona. Efa nanolotra sy vonona hampitoetra ny fiadanana ho antsika sy ny firenentsika Andriamanitra. Ny fihazonantsika tsara sy fiainantsika eo amin’ny fiainantsika isan’andro ny fampianarantsika araka izay maha Loteana antsika dia tena fototra tokoa. Nandalo dingana maro isika FLM: Nanomboka tamin’ny fiakinan-doha tanteraka ka zatra noloram-potsiny. Toa tsy tsaroana na tsy nasiana vidiny ny fanomezana lehibe natolotr’Andriamanitra antsika tao amin’I Jesosy ka dia tsy tena nandray andraikitra araka izay maha mpandova ny Ray antsika isika. Nandray andraikitra tsikelikely ka nandray an-tanana ireo zavatra sasany ary efa mitombo amin’izany ny Fiangonana. Nanao asa Fampandrosoana maro isika araka ny tondrozotra sy fanampiana mety ho voaraintsika. Efa mihasarotra izany ankehitriny na dia irina tsy ho foana tanteraka aza. Tena fotoana fandraisana an-tananana ny FAMPANDROSOANA tokoa ka iheverantsika ny hafa sy hitondrantsika fiainana be dia be ho azy ireny koa. Tsy safidy fa adidy ity fampandrosoana ity rehefa mandinika tsara ny Soratra Masina isika indrindra manome lanja ny teolojia izay ijoroan’ny fiangonantsika.